March 2019 – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
Posted on March 18, 2019 October 25, 2019 AuthorHtet Wai Aung4 Comments
ဇာတ်လမ်းအစ… ကျွန်တော်တို့ ပလန်းနက်ဆိုက်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို စ မိတ်ဆက်တုန်းက ဟာ… ဒီဆိုက် မိုက်တယ်.. မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုရော ရေးလို့ရတယ်.. ဇော်ဂျီဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ယူနီကုတ်ဖောင့်ဆိုပါလား ဆိုပြီးတော့ စွဲစွဲမြဲမြဲ စသုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ဖိုရမ်စွဲပြီး နေ့နေ့ညည အဲမှာပဲ တော်တော် အချိန်ကုန်ခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ခုခေတ်ဖိုရမ်တွေလို အခုရေး အခုတက် မဟုတ်ဘူးဗျ။ အက်မင်တွေ မော်ဒရေတာတွေက တစ်ရက်သုံးကြိမ် စစ်စစ်ပြီးမှ တင်ပေးတယ်။ အဲတော့ သူတို့ ဆင်ဆာလွတ်အောင် ရေးရပြုရတာ တစ်လုပ်၊ သူတို့တင်ပေးတာကို တမျှော်မျှော် မော့ရတာက တစ်လုပ်။ ပလန်းနက်မှာ တစ်နှစ်ကျော်လောက် တောက်လျှောက်ရေးလိုက်သေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ပလန်းနက်ဖိုရမ်မာများဆိုပြီး ဘားလမ်းက မစ္စတာဘရောင်းမှာ ခဏခဏ တွေ့ကြတာ မှတ်မိသေးတယ်။ နံပတ်တစ် ဇော်ဂျီ Read More …
ယူ​နီ​ကုဒ် စာလုံး​စီ​ပုံ – Unicode Encoding
Posted on March 18, 2019 October 25, 2019 AuthorPaingPeace2 Comments
ယူနီကုဒ် အက္ခရာများကို စီစဉ်တဲ့အခါ Logical Order (ဘာသာစကား အသံသဘော) အရ စီစဉ်ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ အဓိက ပြဿနာဖြစ်တာက သဝေထိုးပါပဲ။ သဝေထိုးနဲ့ ခခွေးဟာ ဘယ်ညာလှည့်ပုံသာ ကွဲပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ဘယ်ကို ခလျှောက်ခွေးနေတာလဲလို့ မပြောကြပါ။ ဘယ်ကို သဝေထိုးနေလဲ လို့သာ ပြောပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ သဝေထိုးဟာ သဝေထိုးပြီး ရှေ့ကို ရောက်နေတယ်⁠တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။ မြန်မာစာကို ရှေးလူကြီးတွေက ဒီလိုရေးခဲ့တော့ ထုံးဖြစ်နေသော်လည်း သရကို ရှေ့မှာထားတာ မှားပါတယ်။ နောက်ပြန်ရှင်းပါ့မယ်။ ဟိုးရှေးရှေး ဝင်းဖောင့်၊ စီအီးဖောင့် အစရှိလို့ ဇော်ဂျီဖောင့် ဖြစ်လာတဲ့အထိ Logical Order နဲ့ မစီပါ၊ အမြင်အတိုင်းသာ စီပါတယ်။ ဆိုလိုတာက “ပြောင်း” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို Read More …
Posted on March 18, 2019 October 25, 2019 AuthorPaingPeace3 Comments
အရင်က MyanmarLanguage.Orgမှာတင်ထားတဲ့ ကိုမောင်ဆန်း ရေးထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း ယူနီကုဒ်ကို လူတော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားလာကြပြီး ထောက်ပြဝေဖန်မေးမြန်းတာတွေ ရှိတဲ့အထဲမှာ ညီလင်းဆက်ရေးခဲ့တဲ့ Review on Myanmar Unicode 5.1 & Suggestion ကို ပြတဲ့ပြီး ဒါတွေရှင်းပြီးပြီလားလို့ မေးတဲ့လူတွေ ရှိလာလို့ ဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ Developer တွေက ကိုယ်စီ ရှင်းထားကြပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်တာရယ်၊ မြန်မာလိုရေးထားတာဆိုရင်လည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း မရှိတာကြောင့် တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းပြီး ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ .::Download this article in PDF format here::. ၁။ ယူနီကုဒ်မှာ ပုံသဏ္ဌာန် ထပ်တူထပ်မျှတူရင် သုံးတဲ့နေရာ မတူပေမဲ့ ကုဒ်ပွိုင့်တစ်ခုတည်း ယူပါတယ်။ ဥပမာ Read More …
Categoriesဆောင်းပါးများ, ယူနီကုဒ်အကြောင်းအထွေထွေ, အခြားTagsQ&A, Unicode, ဆောင်းပါး, ယူနီကုဒ်, ရှင်းတမ်း
MCF Expert Roundtable Discussion on Unicode Migration and Technical Support
Posted on March 15, 2019 March 18, 2019 AuthorthixpinLeaveacomment
e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သည့် Unicode Standard နှင့် Myanmar Language Support on Computer Systems များပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်က ကြီးမှူး၍ MCF Expert Roundtable Discussion on Unicode Migration and Technical Support အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၅)ရက်၊ သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၂:၀၀)နာရီ တွင် MICT Park, Conference Hall ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Posted on March 14, 2019 October 24, 2019 AuthorHtet Wai AungLeaveacomment
ယူနီကုဒ်နဲ့ပက်သက်ပြီး သူတို့တွေ ဘာလုပ်ခဲ့ကြလဲ။ သူတို့အလုပ်မရှိလို့၊ အားနေလို့ လုပ်နေကြတယ်ထင်လား။ နည်းပညာပေါ်ကမြန်မာစာ ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်နေတော့မှာလား။ နောက်မျိုးဆက်တွေတွက် ထည့်မစဉ်းစားတော့ဘူးလား။ သမိုင်းတရားခံဖြစ်ခံကြမှာလား။ မြန်မာစာတိုးတက်ဖို့ သင့်မှာရော တာဝန်မရှိဘူးလား။ ယူနီကုဒ်နဲ့ပက်သတ်တဲ့ပြီးသိချင်တဲ့သူတိုင်းကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်းပါ။ အချိန်ပေးပြီးကြည့်ပေးကြပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က ကိုသီဟ၊ ကိုဟန်ဇော် တို့အင်တာဗျူးခဲ့ပြီး ကိုမောင်ဆန်းက မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ တကယ်ကိုဗဟုသုတရပါတယ်။ မေးမြန်းတင်ပြပေးတဲ့အစ်ကိုများ၊ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးကြသောပညာရှင်များနှင့် မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်တိုးတက်အောင် ကြိုးပမ်းပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုလည်း လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေနဲ့ အခုမှယူနီကုဒ်စသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ မေးမြန်းဖြေကြားမှုအသေးစိတ်ဗီဒီယိုလင့်များကိုလည်းအောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ်။ *Unicode Tourists Thiha and Han Zaw went all-day interviews to find out about history and development of Unicode standard Read More …
Categoriesဆောင်းပါးများ, ယူနီကုဒ်အကြောင်းအထွေထွေTagsDocumentry, video, မြန်မာယူနီကုဒ်
Posted on March 14, 2019 March 14, 2019 AuthorHtet Wai Aung1 Comment
ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ စသုံးတဲ့အချိန် က 2006 ခုနှစ် ၁၀တန်းပြီးစအချိန်. ငယ်ငယ်တည်းက ကွန်ပျူတာကို အရမ်းရူးသွပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်က မဝယ်ပေးခဲ့ဘူး. နယ်မြို့ဖြစ်တာလည်း ပါတာကြောင့်မို့ ကွန်ပျူတာဆိုတာ သိပ်ခေတ်မစားလှဘူး. တက္ကသိုလ်စမတက်ခင်ရန်ကုန်ရောက် အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာစကျင်လည်တာပေါ့။ Mirc ခေတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ သူလည်း myanglish လိုပြော ကိုယ်လည်း myanglish လိုပြော။ နောက်တော့ နည်းနည်းသိလာတော့ Gtalk ဆိုတာသုံးနေပြီ။ အဲဒီတုန်းလောက်မှ မြန်မာ လို ရေးထားတဲ့ website နည်းနည်းပါးပါးစတွေ့တယ် planet.com.mmကစသိတာပေါ့ ကွန်ပျူတာမှ မြန်မာ အသံထွက်နဲ့ပေါင်းလာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေခေတ်စားပြီးနောက်ပိုင်း. အင်တာနက်ထဲမှာ မြန်မာလို မြင်ဖို့ရိုက်ဖို့သုံးတဲ့ software လေးတွေကြိုကြား ကြိုကြားပေါ်လာတယ်။. အဲဒီထဲတုန်းက သိခဲ့တာက ကွန်ပျူတာထဲမှာ မြန်မာလိုမြင်ရဖို့ alpha zawgyi ဆိုတဲ့ software လေးသွင်းရမယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်။ Read More …
Posted on March 14, 2019 March 14, 2019 AuthorHtet Wai AungLeaveacomment
မေး။ ။ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ​ဖြေ။ ။ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ စံသတ်မှတ်ချက်ပါ။ ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ ရှိသမျှဘာသာစကား​တွေအားလုံး ကွန်ပျူတာစနစ်မှာ အဆင်​ပြေဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်ပါ။ ​မေး။ ။ဒါဆို ယူနီကုဒ်​ဖောင့်ဆိုတာက။ ​ဖြေ။ ။ ယူနီကုဒ်စံကို လိုက်နာတဲ့ ​ဖောင့်​တွေကို အလွယ်စု​ပေါင်း​ခေါ်တာပါ။ ​ဖောင့်အမည် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မြန်မာ၃၊ သာလွန်၊ ပရပိုဒ် စတာ​တွေ​ပေါ့။ ​မေး။ ။ ဒါဆို ​ဇော်ဂျီ​ဖောင့်က​ရော။ ​ဖြေ။ ။ ​ဇော်ဂျီ​ဖောင့်ဆိုတာက ယူနီကုဒ်စံကို အပြည့်အဝမလိုက်နာပဲ ပြုလုပ်သူစိတ်ကြိုက်လုပ်ထားတဲ့ ​ဖောင့်ပါ။ ​မေး။ ။ အပြည့်အဝမလိုက်နာဘူးဆိုတာက ဘယ်လို​ပြောတာပါလဲ။ ​ဖြေ။ ။ ဥပမာ​ပေါ့ ယူနီကုဒ်စံမှာြရရစ် တစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်။ ပုံစံ​ပြောင်းရရစ်​တွေကို အလိုအ​လျောက် ​ပြောင်း​ပေးရတယ်။ Read More …
မြန်မာသရများ၊ မြန်မာသဒ္ဒါနှင့် မြန်မာသင်ပုန်းကြီး
Posted on March 14, 2019 March 14, 2019 AuthorHtet Wai Aung2 Comments
ခေါင်းစဉ်စဉ်ကြည့်ပြီး လန့်မသွားပါနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေ ရေးမှာပါဗျ။ ဘာသာစာပေတစ်ခုဆိုတာနဲ့ ဗျည်းနဲ့ သရရယ်လို့ ၂ မျိုးရှိတာ သိထားကြပြီးသားပါ။ အင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ ရိုးရှင်းတယ် ဗျည်း သရတွေဟာ ရှေ့နောက်စဉ်ထားတယ်လေ။ မြန်မာမှာတော့ နည်းနည်းရှုပ်သဗျ။ သရကို သင်္ကေတအနေနဲ့ ဗျည်းကို သွားပေါင်းရတယ်။ Complex script လို့ခေါ်တာပေါ့။ အားတော့မငယ်နဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ဘူး ဒေဝနာဂရီ အပါအဝင် အိန္ဒိယ၊ အာရှ အက္ခရာတွေမှာ complex script တွေ အများကြီးပဲ။ အခုတော့ မြန်မာ အကြောင်းပဲ ပြောကြတာပ။ မြန်မာသရကို ၁၁ လုံးရှိတယ်လို့ ပညာရှိတွေဆိုကြတယ်။ (၁၂ လုံးရှိတယ်လို့ သိထားကြတာလဲ ရှိမှာပါ။ ဆက်ဖတ်ရင် ရှင်းသွားမှာပါ) “အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ Read More …
တိုင်းရင်းသားများကို လေးစားပါ ၊ ယူနီကုဒ်ဖောင့်များကို သုံးစွဲကြပါ
Posted on March 13, 2019 October 5, 2019 AuthorHtet Wai AungLeaveacomment
ဒီဆောင်းပါးကို Wayan Vota က ၁၉−၈−၂၀၁၄ ရက်စွဲနဲ့ http://discover.isif.asia/ မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ Discover ရဲ့ အယ်ဒီတာ ဖြစ်ပြီး ICTworks, Technology Salon, Educational Technology Debate, OLPC News, Kurante စသည်တို့ရဲ့ ပူးပေါင်းတည်ထောင်သူ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ *// // ကိုဆန်းထွန်း က ဘာသာပြန်ပါတယ်။ သဘောမကျရင် မူရင်းလင့်မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုကြပါ။ // http://discover.isif.asia/2014/08/respect-myanmar-diversity-use-unicode-fonts/ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗမာဘာသာစကား သုံးစွဲမှု အများဆုံး ဖြစ်နေတာကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာနယ်ပယ် မှာ ရှည်လျား ထွေပြားတဲ့ ခရီးရှည်ကြီး တစ်ခုဖြစ်နေပြီး အော်လိုင်းမှာ ဖေါ်ပြသုံးစွဲဖို့ရာ ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ စနစ်၂ခုကြား သို့လောသို့လော ယုံမှား သံသယတွေ ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ Read More …
Posted on March 13, 2019 March 14, 2019 AuthorHtet Wai AungLeaveacomment
ယူနီကုဒ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ယူနီကုဒ်ဆိုတဲ့ နံမည်စိမ်းစိမ်းကြီးကို ဘာမှန်းမသိပဲ ဘာလို့သုံးခိုင်းနေတာလဲ၊ တို့ဘာသာတို့ အခုလည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ စာရိုက်လို့ရတယ် ဖတ်လို့ရတယ်လေ၊ အလကားအလုပ်ရှုပ်လို့ကွာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ယူနီကုဒ်အကြောင်း မပြောခင်မှာ စကားဦးအနေနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်မြန်မာစာ အကြောင်း အရင်ပြောပါရစေ။ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများမှာ ခဲစာလုံးနဲ့ ပုံနှိပ်တဲ့ခေတ်ကနေ ကွန်ပျူတာနဲ့ စာစီစာရိုက် ပုံနှိပ်ခြင်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ် မြန်မာစာ ခေတ်ဦးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဆိုတာကြီးက ဘာသာစကားတွေကိုမသိပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့ အက္ခရာစာလုံးတစ်လုံးကို နံပါတ်တစ်ခု အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး သိမ်းတယ် ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကာလက ကွန်ပျူတာများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အကန့်အသတ်များရှိတဲ့အတွက် မြန်မာစာလုံး များကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများနဲ့ညီမျှတဲ့ နံပါတ်များနဲ့ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ ရေးသားနိုင်တဲ့ မြန်မာဖောင့်များကို အက်စ်ကီးဖောင့်( ASCII Font) လို့ခေါ်ကြပြီး Read More …